Igama lesiqhelo: Yenyani (ngomlomo) (FEN i toyn)
Igama lebrand: IDilantin, iPhenytek
Udidi lweziyobisi: Iqela antiarrhythmics, iiHydantoin anticonvulsants
Ukuhlaziywa nguPhilip Thornton, iDipPharm. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoMeyi 2, 2021.
IDilantin ( Yenyani sisiyobisi esilwa nesathuthwane, esikwabizwa ngokuba yi anticonvulsant . Isebenza ngokucotha iimpembelelo kwingqondo ezibangela ukuxhuzula.
I-Dilantin isetyenziselwa ukulawula ukuxhuzula . IPhenytoin ayinyangi zonke iintlobo zokuxhuzula, kwaye ugqirha wakho uya kugqiba ukuba liyeza elifanelekileyo na kuwe.
Akufanele usebenzise i-Dilantin ukuba uthatha i-delavirdine (Rescriptor), okanye ukuba uxabana ne phenytoin, ethotoin (Peganone), fosphenytoin (Cerebyx), okanye mephenytoin (Mesantoin). Ukuba ukhulelwe, SUKUQALA UKUTHABATHA la mayeza ngaphandle kokuba ugqirha ukuxelele. IPhenytoin inokwenzakalisa umntwana ongekazalwa, kodwa ukuxhuzula ngexa lokukhulelwa kunokwenzakalisa umama nosana. Ukuba uyakhulelwa ngelixa uthatha iDilantin, SUKUYEKE UKUTHABATHA amayeza ngaphandle kwengcebiso kagqirha wakho. Ukulawulwa kokuthimba kubaluleke kakhulu ngexesha lokukhulelwa kwaye izibonelelo zokuthintela ukuxhuzula zinokugqitha nayiphi na ingozi ebangelwa yi-phenytoin.
Xela ugqirha wakho ngazo naziphi na iimpawu ezitsha okanye eziya zisiba mbi, ezinje: ngokutshintsha kwemozulu okanye indlela oziphethe ngayo, uxinzelelo, uxinzelelo, okanye ukuba uziva uphazamisekile, ubutshaba, ukungazoli, ukudakumba (ngokwengqondo okanye ngokwasemzimbeni), okanye uneengcinga zokuzibulala okanye zokuzenzakalisa.
Akufanele usebenzise i-Dilantin ukuba u-aleji kwi-phenytoin, okanye ukuba wakhe wanayo:
iingxaki zesibindi ezibangelwa yi-phenytoin;
i-aleji kumayeza afanayo afana ne-ethotoin, fosDilantin, okanye meDilantin; okanye
ukuba ngoku uthatha i-delavirdine (Rescriptor).
Ukuqinisekisa ukuba i-Dilantin ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba wakhe wanayo:
iingcinga okanye izenzo zokuzibulala;
ukunqongophala kukavithamini D okanye nayiphi na imeko ebangela ukuncipha kwamathambo;
porphyria (ukuphazamiseka kwe-enzyme yemfuza ebangela iimpawu ezichaphazela ulusu okanye inkqubo yeemvakalelo); okanye
ukuba ungowenzala yaseAsia (unokufuna uvavanyo lwegazi olukhethekileyo ukumisela umngcipheko wokuba nokusabela kolusu kwi-phenytoin).
Abanye abantu baneengcinga zokuzibulala ngelixa bethatha iDilantin. Ugqirha wakho kuya kufuneka akhangele inkqubela phambili yakho kutyelelo rhoqo. Usapho lwakho okanye abanye abakhathaleleyo kufuneka balumkele utshintsho olwenzekayo kwiimvakalelo zakho okanye kwiimpawu.
Ukulawulwa kokuthimba kubaluleke kakhulu ngexesha lokukhulelwa. Ungaqali okanye uyeke ukuthatha iDilantin ngaphandle kwengcebiso kagqirha ukuba ukhulelwe. I-Phenytoin inokulimaza usana olungekazalwa, kodwa ukuxhuzula ngexesha lokukhulelwa kunokubenzakalisa bobabini umama nosana. Xelela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba uyakhulelwa ngelixa uthatha eli yeza.
Ukuba ukhulelwe, igama lakho linokudweliswa kwirejista yokukhulelwa ukulandelela iziphumo ze-phenytoin emntwaneni.
Ukuba uthathe i-phenytoin ngexesha lokukhulelwa, qiniseka ukuxelela ugqirha ohambisa umntwana wakho malunga nokusetyenziswa kwe-Dilantin. Bobabini kunye nosana unokufuna ukufumana amayeza okuthintela ukopha kakhulu ngexesha lokubeleka nasemva nje kokuzalwa.
IPhenytoin inokwenza iipilisi zokulawula inzala ingasebenzi kakuhle. Buza ugqirha wakho malunga nokusebenzisa ulawulo lokuzalwa olungenalo ihomoni (ikhondom, uvalo nge-spermicide) ukukhusela ukukhulelwa.
Akunakukhuseleka ukuncancisa ngelixa usebenzisa eli yeza. Buza ugqirha wakho malunga nayiphi na ingozi.
Ndingayithatha njani iDilantin?
Thatha iDilantin ngokuchanekileyo njengoko kumiselwe ngugqirha wakho. Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza okanye amaphepha emiyalelo. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho.
Ginya i Iphilisi ekhutshiweyo eyandisiweyo iphelele kwaye ungayityumzi, uyihlafune, uyiqhekeze, okanye uyivule.
Iipilisi ze-Dilantin Infatabs ezihlafunwayo azenzelwanga idosi kanye ngosuku. Kufuneka ubathathe kabini okanye kathathu ngemini. Landela imiyalelo yonyango yakho ngokucophelela.
Unokufuna uvavanyo lwegazi rhoqo. Unokufuna uvavanyo lwegazi xa utshintsha usuka kolunye uhlobo lwephentoto ukuya kolunye. Tyelela ugqirha wakho rhoqo.
Tshela ugqirha wakho ukuba iDilantin ibonakala ngathi ayisebenzi kunye nokulawula ukubanjwa kwakho. Sukuyeka ukusebenzisa iDilantin ngequbuliso, nokuba uziva ulungile. Ukuyeka ngesiquphe kunokubangela ukuxhuzula. Landela imiyalelo kagqirha wakho malunga nokucofa idosi yakho.
Kwimeko kaxakeka, nxiba okanye uphathe isazisi sonyango ukwazisa abanye ukuba uxhuzula.
IPhenytoin inokubangela ukudumba kwiintsini zakho. Bhrasha kunye nokufaka amazinyo akho kwaye undwendwele ugqirha wakho wamazinyo rhoqo ukunceda ukuthintela le ngxaki.
Gcina kubushushu begumbi kude nobumanzi, ukukhanya, kunye nobushushu.
I-diazepam ye-10 mg yecwecwe
Funa unyango olungxamisekileyo okanye utsalele umnxeba kuNcedo lweNetyhefu ku-1-800-222-1222. Ukugqithisa kwephentoin kunokuba yingozi. Iimpawu zokudlula ngaphezulu zingabandakanya ukunyakaza kwamehlo, intetho edibeneyo, ukulahleka kwemali eseleyo ukungcangcazela, ukuqina kwemisipha okanye ubuthathaka, isicaphucaphu , ukugabha , ndiziva ndingenantloko, ndiphelelwe ngamandla, kwaye ndiphefumla kancinci okanye kancinci.
Kunqabe ukusela utywala ngelixa uthatha iDilantin. Ukusetyenziswa kotywala kunokunyusa amanqanaba egazi e-phenytoin kwaye kunokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga. Ukusetyenziswa kotywala imihla ngemihla kunokunciphisa amanqanaba egazi e-phenytoin, anokunyusa umngcipheko wokubanjwa.
Buza ugqirha okanye usokhemesti ngaphambi kokusebenzisa amayeza angaphaya kwekhawuntari anje cimetidine , omeprazole , Wort yaseSt , okanye iivithamini kunye nezongezelelo zezimbiwa eziqulathe ifolic acid .
Gwema ukuqhuba okanye ukwenza umsebenzi oyingozi de ube uyazi indlela iDilantin eya kukuchaphazela ngayo. Ukuphendula kwakho kunokungahambi kakuhle.
Kuphephe ukuthatha Izichasi kwangaxeshanye uthatha iDilantin. IiAntacids inokwenza kube nzima emzimbeni wakho ukufunxa amayeza.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeDilantin
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo Iimpawu zokungabikho komzimba kwiDilantin ( imihlathi , ukuphefumla nzima, ukudumba ebusweni okanye emqaleni) okanye ulusu olunamandla (ifiva, umqala obuhkungu , evutha emehlweni akho, iintlungu zolusu, zibomvu okanye zimfusa irhashalala isasazeka kwaye ibangele ukuqhuma kunye nokuxobuka).
Funa unyango ukuba ngaba unengxaki yokusabela gwenxa kweziyobisi ezinokuchaphazela amalungu amaninzi omzimba wakho. Iimpawu zinokubandakanya: irhashalala, umkhuhlane, amadlala adumbileyo, iintlungu zemisipha, ubuthathaka obukhulu, ukutyumka okungaqhelekanga, okanye ubumthubi bolusu okanye amehlo.
Xela ugqirha wakho ngazo naziphi na iimpawu ezitsha okanye eziya zisiba mbi, ezinje ngezi: ixhala , uloyiko, ukungakwazi ukulala, okanye ukuba uziva ungxamile, unomsindo, uphazamisekile, unobundlongondlongo, ubundlongondlongo, awunampumlo, uyadakumba (ngokwengqondo okanye ngokwasemzimbeni), uxinezeleke ngakumbi, okanye ucinga ngokuzibulala okanye ukuzenzakalisa.
ukubetha kwentliziyo okucothayo okanye okungalinganiyo, iintlungu zesifuba, ukubhabha esifubeni sakho, kunye nesiyezi (njengokuba ungaphuma);
Indlela yokusebenzisa i-spirometer
nakuphi na ukurhawuzelela kolusu, nokuba buthathaka kangakanani na;
umkhuhlane, ingqele, umqala obuhlungu, amadlala adumbileyo;
iintsini ezibomvu okanye ezidumbileyo, izilonda zomlomo;
ukugruzuka ngokulula, ukopha okungaqhelekanga, amabala emfusa okanye abomvu phantsi kolusu lwakho; okanye
iingxaki zesibindi Ukuphelelwa ngumdla, iintlungu zesisu, umchamo omnyama, ilindle elinombala odongwe, inyongo (ukutyheli kolusu okanye kwamehlo).
Iziphumo eziqhelekileyo zeDilantin zingabandakanya:
ukuhamba ngokungaqhelekanga kwamehlo; okanye
iingxaki ngokulinganisela, ukulungelelanisa, okanye ukuhamba kwemisipha.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela iDilantin?
Ngamanye amaxesha akukhuselekanga ukusebenzisa amayeza athile ngaxeshanye. Amanye amachiza anokuchaphazela amanqanaba egazi lakho ngamanye amayeza owathathayo, anokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga okanye enze amayeza angasebenzi kakuhle.
Amachiza amaninzi anokusebenzisana ne-phenytoin. Ayisilo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe apha. XELELA UGQIRHA WAKHO NGawo ONKE AMAYEZA OWENZAYO, nayo nayiphi na into oqala ngayo okanye oyekayo ukuyisebenzisa ngexesha lonyango ngeDilantin. Oku kubandakanya amayeza amayeza kunye nalawo e-counter, iivithamini kunye iimveliso zemifuno .
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise i-Dilantin kuphela kulwazi olumiselweyo.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 19.01.
Intlungu edolweni emva kwenaliti ye-synvisc
izibonelelo ze-magnesium oxide
iipilisi zokumisela ubunzima bomzimba ezimiselweyo
Ngaba ubenadryl uza kundenza ndozele
imiqondiso yokuba iflagyl iyasebenza
Ukuthambeka kweekati 1 icwecwe